Chelsea Oo Muhiimad Siineysa Una Dhaqaaqeysa Mid Kamid Ah Daafacyada Juventus
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo Muhiimad siineysa una dhaqaaqeysa mid kamid ah Daafacyada Juventus
September 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsan doonto inay u dhaqaaqdo daafaca dhexe ee Juventus Matthijs de Ligt , ka dib markii ay ku guuldareysteen raacdadii Sevilla ee Jules Kounde .
Blues ayaa dooneysay inay qorto daafac dhexe xagaaga, iyadoo Kounde la rumeysan yahay inuu ahaa bartilmaameedkooda koowaad, si kastaba ha ahaatee waxay diideen inay bixiyaan lacagta lagu burburin karo qandaraaska xiddiga reer France ee £ 68m.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , kooxda Thomas Tuchel ayaa aad u xiiseyneysa De Ligt waxaana ay haatan 22-jirka ka dhigeen liiska ugu sarreeya liiska rabitaankooda.
Tababaraha Jarmalka ayaa durbaba gacanta ku haya Thiago Silva , Antonio Rudiger iyo Andreas Christensen – kuwaas oo dhammaantood wacdaro dhigay illaa iyo hadda ololahan – halka kuwa sida Cesar Azpilicueta iyo Trevor Chalobah ay sidoo kale ka soo muuqdeen wadnaha daafaca xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, mustaqbalka Rudiger ee Stamford Bridge ayaan hadda la hubin , iyadoo 28 jirkaan uusan weli kordhin qandaraaskiisa oo dhacaya xagaaga dambe.
Bixitaanka suurtagalka ah ee Rudiger waxay u badan tahay inay Blues ku riixdo inay la soo saxiixato beddel sannadka 2022 -ka, waxayna hadda u aqoonsadeen De Ligt inuu yahay difaaca dhexe ee ay rabaan inay u jiitaan London.
De Ligt, oo Juventus kaga soo biiray 2019 Ajax, ayaa 80 kulan u saftay tartamada oo dhan kooxda Serie A sidoo kale 31 jeer ayuu u saftay xulka qaranka Holland.